Miyuu Dhammaaday Habaarkii Nebi Muuse (NNKH)? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waxaan ka aragnay Taariikhda reer Binu Israa’iil in sannadkii 70 AD iyaga laga qixiyey Dhulkii loogu ballanqaaday kuna noolaadaan sidii qaxooti ahaan oo loola dhaqmo sidii maxaabiista iyo dadka ajaanib ah quruumaha dunida oo dhan dhexdooda. Intii 2000 sano u dhowayd intaasu waxay ahayd meesha iyo sida reer binu Israa’iil ay ku noolaayeen. Goortay ku noolaayeen quruumaha kala ay xilliyo qaarkood ay silec weyn la kulmeen. Tani waxa ay ahayd gaar ahaan run ku ah dhulka Masiixiyiinta ee reer Yurub. Laga bilaabo dalka Isbaanishka, Galbeedka Yurub, iyo dhulka Ruushka reer binu Israa’iil waxay inta badan ku noolaayeen xaalad aan sugnayn. Erayadii Muuse loogu siiyey habaarka, ay umuli lahayd sidii ku qornayd:
“Oo quruumahaas dhexdooda istareex kama heli doontaan, oo cagtiinnuna ma nasan doonto, laakiinse Rabbigu wuxuu halkaas idinku siin doonaa qalbigariir, iyo indhabbeel, iyo naf dulloobid.” Sharciga Kunoqoshadiisa 28:65
Jadwalka hoose wuxuu muujinayaa muddo 2000 sano oo soo socota tan iyo markii taariikhda reer binu Israa’iil lagu qoray Kitaabka Quduuska ah ka dib. Xilligan waxa lagu muujiyay qaybta ta cas oo dheer ee jangooyadan.
Jadwalka A Historical ah dadka Yuhuudda ka Musa ilaa Maanta
Jadwalka Taariikheedka ee Dadka Yuhuudda laga soo bilaabo nebi Muuse ilaa iyo Maanta Waxaad arki kartaa in reer binu Israa’iil iyagoo taariikhdooda ku dhex mareen laba waqti ah oo la masaafuriyey laakiin mudada labaad ee la kala eryey ee ahaa wax badan ka sii dheer xilliga ugu horreeya ee laga eryey dhulkoodii (oo ay ahayd muddada 600 – 530 BC oo keliya).
Yuhuuddu waxay dhawreen Aqoonsiga dhaqankooda
Waxaa soo jiidasho leh xagayga waa in kastoo reer binu Israa’iil weligood ma lahayn meel dhexe ay hoos u dhigay xididdada dhaqanka, oo haddana in kastoo ay marnaba tiradoodu aysan aad u fara badan (oo inta badan sababta oo ah dhimashada oo ay keento cadaadis lagu hayey) marna aysan lumin aqoonsigooda dhaqameed muddo 2000 sano gaaraysa. Taasi waa arrin cajiib ah. Halkan Tawreedka waxaa ku qoran liiska quruumaha oo dhan ee ku noolaa Dhulka Ballanqaadka waqtiga Calaamadda 1 ee Muuse (NNKH).
“oo waxaan u imid inaan ka samatabbixiyo gacanta Masriyiinta, iyo inaan ka soo bixiyo dhulkaas, oo keeno dhul wanaagsan oo ballaadhan, oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan; waana meesha ay deggan yihiin reer Kancaan, iyo reer Xeed, iyo reer Amor, iyo reer Feris, iyoreer Xiwi, iyo reer Yebuus.” Baxniintii 3:8
Oo wakhtiga siintiisa ah Barakada iyo Inkaarta:
“Markii Rabbiga Ilaahiinna ahu idin geeyo dalka aad ugu socotaan inaad hantidaan, oo uu hortiinna ka eryo quruumo badan oo ah reer Xeed, iyo reer Girgaash, iyo reer Amor, iyo reer Kancaan, iyo reer Feris, iyo reer Xiwi, iyo reer Yebuus, kuwaasoo ah toddoba quruumood ooidinka weyn oo idinka xoog badan” Sharciga Kunoqoshadiisa 7:1
Dadkani mid ka mid ah weli ma jiraa, ama haysashada aqoonsigooda dhaqankooda ama luqaddoodaa? Maya, waa ay lumeen tan iyo wakhti dheer. Waxaan ka naqaanaa ‘Reer Girgaash’ taariikhda qadiimiga ah oo keliya. Dalka Baabiloon ee xoog badan, Reer Feris, Dalka Giriig iyo Boqortooyadii Roomaanka ka dib ay ku guulaysteen inay quruumahaas ay si deg deg ah uga badilaan afkooda iyo aqoonsiga ay dhex galeen kuwii Boqortooyinkii qabsaday. Sidoo kale aan ku noolahay dalka Kanada oo aan arko dad dalka u soo guuray oo halkan soo degay ka yimid adduunka oo dhan. Ka dib jiilka 3aad dhaqanka iyo luqada ee dalkii ay ka yimaadeen ayeey kaga tagaan. Waxaan ka imid Iswidhan oo aan ka soo haajiray una soo haajiray Kanada markii aan aad u yaraa. Wiilkaygu hadda kuma hadlo afka Iswidishka. Iyaguna kuma hadlaan caruurta walaalkay ama kuwa walaashay. Aqoonsiga dhaqanka Iswidishka ee dadkayga uu sii baaba’aya kuna sii dhex milmaya dhaqanka Kanada. Oo kanuna waa ka run yahay kulli galootiga imaanaya dalkan mayshay doonaa ha ka yimaadaane sida Shiinaha, Jabaan, Kuuriya, Iiraan, Koonfur Ameerica, Afrika ama dalalka Yurub – saddex jiilaal? Ka dib ayeey ku baaba’aan. Sidaas darteed waa cajiib in reer binu Israa’iil, oo ku nool cadaawad sida, lagu qasbay in ay halkan iyo halkaas ugu cararo qarniyo badan, ay dadka caalamka marna ka badnayn 15 milyuun oo qof, marna aan lumin aqoonsiga dhalashadooda – diimeed, dhaqan iyo luqad – inkastoo ay dulmigan socotay muddo 2000 sano.
Xasuuqa Casriga ah ee Yuhuudda – jinsi tirtirridda (The Holocaust)
Markaasaa silecyada iyo xumaanta Yuhuudda ku gaadhay meesha ugu sarreysa. Adolph Hitler oo ahaa hoggaamiye ee dalka Jarmaalka wakhtiga dagaalkii labaad ee dunida, isaga iyo xisbiga Nazi ay isku dayeen in ay tirtiraan Yuhuudda oo dhammu ku nool Yurub. Oo isna wuxuu ku dhowaaday in uu ku guulaysto, iyadoo la abuurayo nidaam matoorada ee iyaga baabi’inaya foornooyinka gaaska. Si kastaba ha ahaatee waa laga adkaaday iyo kuwii ka soo badbaaday ayaa Yuhuudda ka hadhay.
Dib-u-dhalashada Casriga ah ee reer binu Israa’iil
Markaas sannadkii 1948 ayaa reerka Yuhuudda, iyagoo loo taageeray Qaramada Midoobay, ayay arkeen dib-u-dhalashada cajiibka ah dawlada casriga ah ee reer binu Israa’iil. Waxaa cajiib ah, sida kor ku xusan, in ay jiraan dad naftooda loona aqoonsaday ‘Yuhuudda’ sanaddan oo dhan dabadood. Laakiin waayo, erayadanu Muuse qoray 3500 sano ka hor si ay u rumowday waxaa lahaa inuu sii joogo ‘adiga’ ama dad heli kara wixii loo ballanqaaday. Sidaas daraaddeed waxay ku hadhay oo dadka xitaa halka ay maxaabiista ku ahaayeen muddo dheer.
“Markaasaa Rabbiga Ilaahiinna ahu idinka celin doonaa maxaabiisnimadiinna, wuuna idiin naxariisan doonaa, oo mar kaluu idinka soo ururin doonaa quruumihii Rabbiga Ilaahiinna ahu uu dhexdooda idinku kala firdhiyey oo dhan. Oo haddii masaafirradiinna qaarkoodu joogaan meesha samada ugu shishaysa, Rabbiga Ilaahiinna ahu halkaasuu idinka soo ururin doonaa, oo halkaasuu idinka soo kaxayn doonaa Sharciga” Kunoqoshadiisa 30:3-4
Kani waa dhab ahaantii calaamad muujinaysa in Ilaah hayaa Kalimadiisii.
Waxa kale oo uu ahaa mid cajiib ah in dawladan laga aasaasay mucaaradnimo xoog leh hortood. Inta badan quruumaha dawladaha halkaas la dagaallameen reer binu Israa’iil ee 1948 … 1956 … 1967 iyo mar kale in 1973. Israa’iil, quruun aad u yar, marar badan kula dagaalay shan quruumaha waqti isku mid ah. Weli ma ahan oo keliya in ay badbaadeen, laakiin dhulalka haystaa ayaa kordhay. Dagaalkii 1967 Yuhuuddu Yeruusaalem ayeey dib u qabsadeen, iyo magaalada taariikhiga ah oo casriga ah uu Daaw’uud (David) aasaasay.
Muxuu Ilaah u ogolaaday dib-u-dhalashada reer binu Israa’iil
Ilaa hadda horumarka casriga ah waa mid aad u muran badan. Ma dhacdo wax kale oo casri ah yididiila muran aad u badan sida dib-u-dhalashada dalka Israa’iil iyo soo laabashada reer binu Israa’iil hadda ku dhawaad maalin kasta ka dhacaya, markay ka soo noqonayaan quruumaha adduunka oo dhan, halkaas oo ay ku noolaayeen kumanaan sano musaafuris. Oo malahaas markaad ku akhridaan naftaada aad u cadhooday. Waxaa hubaal ah ma’ahan in Yuhuuddu ay maanta yihiin dad diineed – inta badan waa kuwo diin la’aan ah ama diin yar, ayna yihiin kuwo aad u aaminsan cilmiga cilmaaniga ah amaba ay yihiin kuwo diin laaweyaal, sababtoo ah waxa uu Hitler ku halaagi lahaa xasuuq ku dhow guul. Oo ma’ahan in ay tani tahay daruuri sax ah. Laakiin xaqiiqadda dhabta ah ee cajiibka ah waa waxa Muuse ku qoray hoos oo ay dhamaadkii Lacnadu ay ku dhacday oo ay weli ku dhacayso indhahayaga hortooda. Waa maxay sababtu? Waa maxay tan macnaheedu? Oo sidee bay tani ku dhici kartaa mar haddii ayba weli diidan yihiin Ciise Masiix? Kuwani waa su’aalo muhiim ah. Jawaabaha su’aalahan oo dhan waxaa laga heli karaa Tawreed iyo Zabuur. Waxaa laga yaabaa in aad ka cadhootay waxa keliya ee aan qoray, laga yaabee mid aad u qadhaadh. Laakiin waxaa laga yaabaa in aan isxakamayn karno oo dibna u dhigan doono xukunka ilaa aynu ka fahmi qaar ka mid ah wixii nebiyadu qoreen ku saabsan dhacdadan la yaabka badan oo lana taaban karo.Waxay iyaga u soo qoray faa’iidaddeenna aawgeed – maxaa yeelay, waxaas oo dhan waxay keeni doontaa Qiyaame – waayo Yuhuud iyo inta kale oo dhan si isku mid ah. Ina keena aynu ugu yaraan ku wargelino wixii nebiyada oo dhan qoreen si aan u abuuri karno xukummo faham ku saabsan waxay qoreen. Waxaan sii wadi doonaa Sabuur si aan u weydiino sababta Yuhuuddu u diiday Masiix.